နန်းဆိုင်နွမ်| February 19, 2013 | Hits:9,431
| | ဖုန်တလူလူ နေပူပူထဲတွင် ၀ါး၊ ဓနိများဖြင့် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ တဲအိမ်သစ်များ ဆောက်လုပ်နေကြသည်မှာ ပွဲဈေးတန်းတခု အစပြုတော့မလားဟု မြင်မိသည်။ တဲအိမ်သစ်များက တထောင်ကျော်ခန့် ရှိမည်။
Sunshine February 19, 2013 - 12:12 pm This is what lawlessness is all about. How do they get the land? Nobody owned the land in the past or what?
Reply ml February 20, 2013 - 3:43 am ဒါက လူအုပ်စုနဲ့ ရမ်းကား မတရားနေရာယူတာပါ။ အင်အားသုံးဖယ်ပြီး ကျူးကျော်တွေကို ထိုက်သင့်တဲ့ အပြစ်တွေ ပေးသင့်ပါတယ်။
Reply angel February 20, 2013 - 12:45 pm ရဲတွေကလည်းဒါမျိုးကြတော့လက်စွမ်းမထက်ကြတော့ဘူး။ လက်ပန်းတောင်းတောင်
Reply kumudra February 20, 2013 - 4:39 pm These lawless people will use the words such “democracy” or “human rights” if Government takes action.
Reply kyaw kyaw February 22, 2013 - 11:29 pm ဘာလုပ်သင့်လဲ ? ဘာဖြစ်သင့်လဲ ? ဘယ်လိုဖြေရှင်း မလဲ ? စိတ်ဝင်စားတာကတော့ အမှန်ပဲ။ မြင်နေတာကတော့ ဒီကနေ့ နာမည်ကြီး ပါတီတွေမှာ ဒီလိုလုပ်စားဖို့ ချောင်းနေတဲ့ လူမိုက်တွေ ၊ ထောင်ထွက်တွေ ၊ အဲဒီလို လုပ်လိုက်မိတဲ့ ကျူးကျော်တွေ အပေါ်မှာလည်း ကယ်တင်ရှင် ပုံစံမျိုးနဲ့ ရသလောက် ချူစားသွားတာမျိုးတွေ နေ့တဓူဝတွေ့နေရတာပဲ။ မြေသိမ်းခံရလို့ အဲဒီ လူတွေကို ထောက်ပံ့ဖို့ဆိုပြီး အလှူငွေ ၊ ထမင်းထုတ် တွေကို (၈၈)အဖွဲ့က ဆိုပြီး တံဆိပ်တွေတပ် ရသလောက် ယူသွားပြီး မဖြစ်စလောက်သွားပေးပြီး ကျန်တာကို ဝေစားနေတာတွေလည်း တွေ့နေရတယ်။ ဆင်းရဲသားတွေကလည်း (၈၈)ဆို ကယ်တင်ရှင်လားလို့ ထင်နေကြတာ၊ တကယ်တော့ အဲဒီဆင်းရဲတဲ့သူ စာမတတ်သူတွေကို ရသလောက် လိမ်စားနေကြတာတွေပါပဲ။ ဒီတော့ မြန်မာပြည်သားတွေ ဒီမိုကရေစီ ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ဘယ်လိုသဘောပေါက်နေသလဲဆိုတာသာ စဉ်းစားပြီး ခုတည်းက မင်းမဲ့စရိုက်စီ ဦးမတည်ဖို့ ၀ိုင်းထိန်းကြဖို့တော့ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာ လုပ်ဖို့ တာဝန်ရှိသူတွေကို နားလည်စွာနဲ့ တာဝန်တွေပေးအပ်သင့်ပါတယ်။ နောက်မဟုတ်ရင် သက်ဦးဆံပိုင်စနစ် ကနေ နှစ်တစ်ရာကျော် ကျွန်စနစ် အဲဒီကနေ ခေတ်စနစ်တွေ ခုန်ကျော်လို့ ဆိုရှယ်လစ်စနစ် ဟော ခုန်ကျော်ပြီး ခု ဒီမိုကရေစီ စနစ်ဆိုတာကို နေ့ချင်းညချင်းရောက်လာတော့ သူများနိုင်ငံလိုတခုချင်း မပြောင်းပဲ ပြည်သူတွေကို အတင်းအကျပ် ဇွတ်ဖန်တီးနေသလို ဖြစ်ပြီး အူကြောင်ကြောင် တိုင်းပြည် ဖြစ်နေပါအုံးမယ်။ ဒီတော့ သူများနိုင်ငံမှာ ဘယ်လိုနဲ့နေခဲ့နေခဲ့ ကိုယ်တိုင်းပြည်ကို ဖြစ်သင့်တာလောက် ကစပြီးပဲ ပြောင်းဖို့ လုပ်ကြပါ။ အတင်းမတိုက်တွန်းကြပါနဲ့လို့ ပြောပါရစေ။
Reply ကောင်းစေချင် March 2, 2013 - 8:00 am ကိုကျော်ကျော်လို အမှန်အတိုင်းတွေးခေါ်နိုင်တဲ့commentတွေကိုကြိုဆိုပါတယ်။ angelဆိုတဲ့